Thursday June 20, 2019 - 19:34:06 in Wararka by Super Admin
Hargaysa(Saylactoday) Mashruucii biyo balaadhinta ee caasimada Hargeysa ayaa ku dhow in uu fashilmo, ka dib markii ay istaagtay shaqadii ka socotay gudaha caasimadu, lama garanaayo sababta keentay in ay istaagto shaqadu. Hasa yeeshee waxa la sheegay in uu jiro muran u dhexeeya Maaareeyaha wakaalada Biyaha Hargeysa. Maxamed Daarood iyo shirkadii waday hawsha biyo balaadhinta Magaalada Hargeysa. Lama garanaayo waxa keenay muranka u dhexeeya maareeye Maxamed Daarood iyo shirkada, hasa yeeshe waxa la sheegay in uu ka dhashay is qabqabsi iyo kala riixasho ku saabsan xaga lacagta.
Mareeyaha wakaalada Biyaha Hargeysa. Maxamed Daarood ayaa la sheegay in uu dhowr jeer ka codsaday shirkada biyo balaadhinta Hargeysa in ay usoo wareejiyaan lacag xaqul qalin ahayd oo ay ku heshiiyeen waqtigii la kala xulanaayay shirkadii u tartamaayay mashruuca biyo balaadhinta Hargeysa. Hasa yeeshee shirkada ayaa ka dhago adayg tay dalabka maareeyaha,
Wixii intaasi ka dambeeyay waxa la sheegay in Maareeyaha wakaalada Biyaha Hargeysa. Maxamed Daarood uu ka cago jiiday in uu la shaqeeyo shirkada, wax kasta oo looga baahdo dhinaciisa waxa ay qaadatay mudo todobaadyo ah in uu ka jawaabo. Sidaasi daraadeedna shirkadu waxay dareentay culays badan oo xaga socodka shaqada ah.
Qaar ka mid ah shaqaalahi ka hawl galaayay mashruuci biyo balaadhinta ee Caasimada Hargeysa. Ayaa sheegay in ay gabi ahaanba istaagtay shaqadi sababa la xidhiidha khilaafka u dhexeeya maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa iyo masuuliyiinta shirkada.
Weriyayaal ka tirsan Shabakada wararka ee saylactoday.com oo saaka booqday wakaalada biyaha Hargeysa si ay wax uga weydiiyaan maareeyaha wakaalada Biyaha Maxamed Daarood ayaa kala kulmay arrin ku cusub milgaha masuuliyada dawlada, Maareeyaha ayaa weriyayaasha ka baxsaday waxanu si degdeg ah u fuulay gaadhigiisa ka dibna waxa uu ka dalacday Muraayadaha. Weriyayaasha ayaa dhowr jeer isku dayay in ay maareeyaha la hadlaan hasa yeeshee uma jawaabin,
Dadweyne joogay saaka xarunta wakaalada Biyaha Hargeysa ayaa sheegay in uu maareeyuhu ku jiro xaalad dhuumalaysi ah, isaga oo aan waqti badan fadhiisan goobta shaqada iyo xafiiskiisa.